အိုမီဂါ3အကြောင်း အမေးအဖြေ | Page 773 | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အိုမီဂါ3အကြောင်း အမေးအဖြေ
>> အိုမီဂါ3ငါးကြီးဆီကို ဘယ်လိုငါးတွေကနေ ရရှိနိုင်သလဲ?
ဆာဒင်းငါး၊ ဆော်လမွန်ငါး၊ တူနာငါးနဲ့ အခြားသော ပင်လယ်ငါးတွေမှာ အိုမီဂါ3ငါးကြီးဆီ ပြည့်ဝစွာပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေကတော့ ငါးစားတာကို တစ်ပတ်နှစ်ရက်လောက်သာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ပင်လယ်ငါးများ ရေရှည်စားသုံးခြင်းက အခန့်မသင့်လျှင် ပင်လယ်ရေထုညစ်ညမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခဲ၊ ပြဒါးအဆိပ်သင့်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိုမီဂါ3ဓာတ်ဟာ သန္ဓေသားလေးနဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းအတွက် အလွန်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်တွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေကို တစ်ပတ်လျှင်2ကြိမ်သာ ငါးစားသုံးခိုင်းပြီး အိုမီဂါ3ပါဝင်တဲ့ ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေကို နေ့စဉ်ပုံမှန်သောက်သုံးခိုင်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။
>> အစားလည်းစားမယ်…ဆေးလည်းသောက်ရင်ကော ရလား?
အဆင်ပြေပါတယ်။ အစားအသောက်ကနေ အိုမီဂါ3ကိုရရှိနိုင်သလို အိုမီဂါ3ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေကိုလည်း အခုနောက်ပိုင်း သုံးစွဲမှုများလာတာတွေ့ရပါတယ်။
ရေရှည်စွဲသောက်ကြတဲ့ ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေမို့လို့ သေချာသန့်စင်ထားတဲ့ ကုန်ကြမ်းတွေကို အသုံးပြုထားတဲ့ ဆေးမျိုးတွေကိုသာ ရွေးချယ်သောက်သုံးဖို့ကိုလည်း အကြံပြုလိုပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွက် အိုမီဂါ3လိုအပ်ချက်က အကြမ်းဖျဉ်းအနေနဲ့ 500 mg ၀န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုများသူတွေနဲ့ ကင်ဆာရောဂါတွေကို ကာကွယ်လိုသူတွေမှာတော့ ဒီထက် ပိုများများရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Maxx Omega31
>> ကုသဆေးဝါးလား ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးလား?
ဖြည့်စွက်ဆေးဝါးသက်သက်သာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအာနိသင်ရရှိဖို့ အစားအသောက် လေ့ကျင်ခန်း နဲ့ တခြားလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပါ သေချာသောက်သုံးပေးဖို့လိုပါတယ်။ အဆစ်ရောင်နေသူတွေဆိုရင်တော့ အိုမီဂါ3အပြင် အဆစ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့အတူ ပေါင်းစပ်သောက်သုံးမှ တွဲဖက်ပေးမှ အကောင်းဆုံးအာနိသင်ရရှိမှာပါ။
ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးပမာဏအတိုင်း (သို့) ဆေးညွှန်းစာအတိုင်း သောက်သုံးပါက အန္တရာယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
Maxx Omega32
>> အိုမီဂါ3ငါးကွီးဆီကို ဘယျလိုငါးတှကေနေ ရရှိနိုငျသလဲ?
ဆာဒငျးငါး၊ ဆျောလမှနျငါး၊ တူနာငါးနဲ့ အခွားသော ပငျလယျငါးတှမှော အိုမီဂါ3ငါးကွီးဆီ ပွညျ့ဝစှာပါဝငျလကျြရှိပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျတှနေဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှကေတော့ ငါးစားတာကို တဈပတျနှဈရကျလောကျသာ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။ ပငျလယျငါးမြား ရရှေညျစားသုံးခွငျးက အခနျ့မသငျ့လြှငျ ပငျလယျရထေုညဈညမျးခွငျးကွောငျ့ဖွဈတဲ့ ခဲ၊ ပွဒါးအဆိပျသငျ့မှုတှေ ဖွဈပှားနိုငျတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိုမီဂါ3ဓာတျဟာ သန်ဓသေားလေးနဲ့ ကလေးငယျရဲ့ ဦးနှောကျဖှံ့ဖွိုးမှုပိုငျးအတှကျ အလှနျကို လိုအပျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျတှကေ ကိုယျဝနျဆောငျတှနေဲ့ နို့တိုကျမိခငျတှကေို တဈပတျလြှငျ2ကွိမျသာ ငါးစားသုံးခိုငျးပွီး အိုမီဂါ3ပါဝငျတဲ့ ဖွညျ့စှကျအားဆေးတှကေို နစေ့ဉျပုံမှနျသောကျသုံးခိုငျးတာ ဖွဈပါတယျ။
>> အစားလညျးစားမယျ…ဆေးလညျးသောကျရငျကော ရလား?
အဆငျပွပေါတယျ။ အစားအသောကျကနေ အိုမီဂါ3ကိုရရှိနိုငျသလို အိုမီဂါ3ဖွညျ့စှကျအားဆေးတှကေိုလညျး အခုနောကျပိုငျး သုံးစှဲမှုမြားလာတာတှရေ့ပါတယျ။
ရရှေညျစှဲသောကျကွတဲ့ ဖွညျ့စှကျအားဆေးတှမေို့လို့ သခြောသနျ့စငျထားတဲ့ ကုနျကွမျးတှကေို အသုံးပွုထားတဲ့ ဆေးမြိုးတှကေိုသာ ရှေးခယျြသောကျသုံးဖို့ကိုလညျး အကွံပွုလိုပါတယျ။ တဈနတေ့ာအတှကျ အိုမီဂါ3လိုအပျခကျြက အကွမျးဖဉျြးအနနေဲ့ 500 mg ဝနျးကငျြဖွဈပါတယျ။ နှလုံးရောဂါရှိသူတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုမြားသူတှနေဲ့ ကငျဆာရောဂါတှကေို ကာကှယျလိုသူတှမှောတော့ ဒီထကျ ပိုမြားမြားရရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။
>> ကုသဆေးဝါးလား ဖွညျ့စှကျဆေးဝါးလား?
ဖွညျ့စှကျဆေးဝါးသကျသကျသာဖွဈပါတယျ။ အကောငျးဆုံးအာနိသငျရရှိဖို့ အစားအသောကျ လကေ့ငျြခနျး နဲ့ တခွားလိုအပျတဲ့ဆေးဝါးတှကေိုပါ သခြောသောကျသုံးပေးဖို့လိုပါတယျ။ အဆဈရောငျနသေူတှဆေိုရငျတော့ အိုမီဂါ3အပွငျ အဆဈအတှကျ လိုအပျတဲ့ဆေးဝါးနဲ့အတူ ပေါငျးစပျသောကျသုံးမှ တှဲဖကျပေးမှ အကောငျးဆုံးအာနိသငျရရှိမှာပါ။
ဆရာဝနျညှနျကွားထားတဲ့ ဆေးပမာဏအတိုငျး (သို့) ဆေးညှနျးစာအတိုငျး သောကျသုံးပါက အန်တရာယျ မဖွဈနိုငျပါဘူး။
၂၆.၁၁.၂၀၁၆ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ရောဂါပိုးဝင်ရောက်လာချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိခုခံအားစနစ်က ဒီရောဂါပိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ခုခံအားစနစ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ရောဂါပိုးတွေကို မတိုက်ထုတ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ရောဂါပိုးဝင်တဲ့အဆင့်ကနေ ပိုပြီးဆိုးတဲ့ သွေးဆိပ်သင့်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားပါမယ်။
သံလွင်ဆီက ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ကုသပေးနိုင်ပါသလား
၂၅.၁၁.၂၀၁၆ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ဝမ်းချုပ်ခြင်းဆိုတာ အစာချေစနစ်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသက်အရွယ်မရွေးမှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ သုံးကြိမ်ထက်နည်းပြီး ဝမ်းသွားတာ (သို့) ဝမ်းသွားရခက်ခဲပြီး သေးငယ်၍ မာခြောက်တဲ့ဝမ်းမျိုးတွေသွားတာမျိုးကို ဝမ်းချုပ်တယ်လို့အကြမ်းဖျင်းသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။